Nhau Blog yeIndi Tagged "Hutano uye Kudzidziswa" - THE INDIAN FACE
Emotional manejimendi uye kukanganisa kwaro kugara zvakanaka uye kuita kwemitambo
Zvemitambo uye Zvemweya Njere? Sanganisa zvese zviri zviviri uye ita yako mitambo kuitisa uye nekubudirira. Muchinyorwa chedu nhasi, Leticia Montoya, wezvepfungwa wezvemitambo, anotiudza izvo zvaunofanira kuziva nezve manejimendi manejimendi, maitiro ekuzvidzora uye maitiro azvinoita mukuita kwedu isu vanoita zvemitambo.
4 maresipi neSalmoni yekudzosa mushure mekushanda kwako.
Pedzisa maitiro ako kana zvasvika kumitambo nechikafu chine hutano! Ndokusaka muchinyorwa chedu nhasi tinokuunzirai mana mabikirwo anonaka akavakirwa pa Salimoni, hove yebhuruu inounza mabhenefiti mazhinji kuhutano hwedu uye yakakwana kupora mushure mekutamba mitambo.
Iwo mabhenefiti eyoga uye anonyanya nzvimbo nzvimbo kuzviita!
Yoga chiitiko chinobatanidza muviri nepfungwa kuti uwane mukana wakakosha maunowana iwe uine rugare newe uye neavo vakakukomberedza. Zvakanakira iyo yoga zviri pachena uye zvinogona kuoneka. Isu tinokuudza nezvavo pazasi uye tinokukurudzirawo kwaungaenda kana iwe uchida kutizira kune iyo yogi mafuratira!
Kutanga kumhanya sei
Kutanga kubva pakutanga kwese kunonetsa kupokana uye sarudzo yakaoma. Chokwadi iwe urikushamisika zvinhu se ... Ungatanga sei kumhanya? Ini ndichakwanisa kuzviita? Ndinofanira kuzviita? In The Indian Face Isu tinogara tichikukoka kuti uzvivimbe uye zvakare kukoshesa hutano hwako uye kugarika kupfuura zvimwe zvese. SRamba uchiverenga uye uwane mazano matsva, manomano uye kurovedza zvinozoita kuti ude kumhanya mangwana.
Dzidzira kune freeride! Kuita kwepanyama kwakanakisa kwemwaka weski!
Yakagadzirira iyo Ski mwaka? Freeriding inoda, pasina kupokana nezvazvo! Zvese zviri mudanho rekukwira uye rekudzika, mutasvi anofanirwa kuve nematanho emamiriro ezvinhu epanyama kuti akwanise kuzadzisa zvinangwa zvake. Pasina kupokana ndiyo nguva yekumutsiridza yako Magirazi eSki uye gadzirira kuita! Verenga pamusoro uye tsvaga maitiro ekuvandudza yako freeride maitiro.
5 nzira dzekushandisa muviri wako kune makomo
Iva nani mugomo wepamusoro neaya mashanu ekudzidzira! Zvakakosha rovedza muviri wedu kumakomo kana isu tichidzidzira kukwira makomo, kufamba kana kukwira makomo. Tevedza aya matipi uye uve mutambi ari nani mazuva ese nekudzidziswa munzira kwayo!
IMBONESA YAKO SURF NEMABASA mashanu
Rangarira kuti maitiro anoitwa nemudzidzisi, uye rovedzaiwo! Isu tinokusiyira yakanakisa 5-nhanho chiitiko kuti iwe urambe uchifunga kana uchirovedza muviri wako uye kugadzirisa nzira yako yekuseta.
Kurovedza kwemaoko kune vanokwira
Kana iwe ukatevera nzira iyi nguva nenguva (kutora zvese zvekudzivirira) zvichave zvakanaka kuwana ruoko rweanokwira uye kumashure izvo iwe zvaunoda zvakanyanya.
Maitiro Ekurovedza muviri usati warara
Pasina kurovedza muviri? Hapana dambudziko! Kana usati wave nenguva yekurovedza muviri mukati mezuva, tevedzera nzira iri nyore manheru usati warara.
Nzira yekudzivirira iyo Office Syndrome
Iyo inonzi office syndrome inoitika mushure memaawa akati wandei ndakagara pamberi pekomputa. Vanhu vazhinji vanonyora, kugadzira kana kurongedza mapikicha emitambo - uye zvimwe zviitiko - vangasatarisa kune nguva yavanoshandisa pakombuta yavo. Tsvaga kuti izvi zvinogona sei kukanganisa muviri wako uye maitiro ekuzvidzivirira!
Yakanakiswa Norimoni salmon. Iyo ine hutano chaizvo yekubheka
Salmon yakave imwe yeanodyiwa zvakanyanya ebhuruu pasi rose. Kwete chete nezvekunakirwa kwayo kwakanaka, asiwo nezve zvinovaka muviri. Mukuwedzera, icho chikafu chinogona kugadziriswa munzira dzakawanda nekuti mukwende waro unoenderana chaizvo nenzira dzakasiyana dzekubika.
Hutano Pancakes Recipe Pasina Giya Flour
Gadzira zvinonaka zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvemangwanani kana zveOatmeal Almond Pancakes!
Vanhu vazhinji vari kuwana izvo zvakashata izvo zvikafu zvegorosi-zvinogadzirwa nehupfu zvinogona kuve nehunhu hwavo pahutano, kunyanya kune vanhu vari celiac uye gluten isingashiviriri.
10 tsandanyama inotambanudza kuti itange yako Workout routines
Isu tinopa gumi inotambanudza izvo zvausingafanirwe kukanganwa usati watanga maitiro ako ekurovedza muviri. Izvi zvichabatsira kudziya mhasuru dzako usati waazunza.
Matipi mashanu ekudzivirira cancer
Isu tinopa mazano mashanu anozobatsira iwe kudzivirira chirwere chekenza. Zviri kwatiri kuti tiite zvese zvinobvira kuti tive nehutano hwakanaka hwemaziso nekudzivirira izvi nezvimwe zvirwere zvinogona kukanganisa maziso edu.
Kukuvadzwa mukufamba-siki uye chando chechando: zvinogara zvakanaka kuti uzive nezvavo
Ski uye Snowboard Kukuvara - Nguva Dzose Kwakanaka Kuziva Pakati pemwaka weski iwe unogona kunge uchiri kuronga rwendo uye kupedza mazuva mashoma uchinakidzwa nechando uye uchirovedza muviri. Kunyangwe chinhu chako chiri chinyakare kusvetuka kana kusvetuka kwechando, nhasi tinoda kukufananidza muchidimbu nezvako
Maitiro ekuve mune chimiro kuti ski nguva ino yechando
Vhiki rapfuura isu takaburitsa chinyorwa kugovana matipi eanotanga skiers. Nhasi tinokuunzira nhevedzano yezviito zvinokurudzirwa kuti upinde muchimiro usati waenda kuchando muchando ichi, zvinoshanda kune vese vanokudzwa muchadenga uye kune avo vatove neruzivo. Kutanga, mhasuru dzaunofanira kushanda zvakanyanya ndidzo dze